Inona no fantatrao momba ny fandavahana herinaratra
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-15
Ny fandavahana elektrika dia milina fandavahana izay mampiasa herinaratra ho herinaratra. Izy io dia vokatra mahazatra amin'ny fitaovan'ny herinaratra ary vokatra maivana indrindra amin'ny angovo angovo. Ny famaritana lehibe amin'ny fandavahana herinaratra dia 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 32, 38, 49mm, sns. Ireo isa dia manondro ny savaivony faran'ny ...
Fomba hisafidianana basy rano fanerena
Miaraka amin'ny fiakaran'ny fananana fiara dia nisondrotra ihany koa ny vidin'ny fanasana fiara. Betsaka ny tompona fiara tanora no nanova ny fomba fijeriny hisafidianana fanasana fiara an-trano mora vidy, haingana, mora ary milamina. Rehefa manasa fiara ao an-trano dia ilaina koa ny manana fiara manasa rano gu ...
Fahasamihafana eo amin'ny Lithium Drill 12V sy 16.8V
Matetika ampiasaina amin'ny fiainantsika andavanandro ny fandavahana herinaratra. Rehefa mila mandavaka lavaka na mametraka visy ao an-trano isika dia mila mampiasa torolàlana momba ny herinaratra. Misy ihany koa ny tsy fitoviana eo amin'ny fizahana herinaratra. Ny mahazatra dia 12 volt ary 16.8 volts. Dia inona no mahasamihafa azy roa? Inona avy ireo ...
Tamin'ny volana aogositra 2020, namolavola modely lithium vaovao ny orinasanay ……
Tamin'ny volana aogositra 2020, ny orinasanay dia namolavola maodely vaovao an'ny fitaovana herinaratra bateria lithium, basy rano bateria lithium ary trimmer zaridaina bateria lithium, ary nandalo ny fanamarinana GS, nanokatra ny lalana ho an'ny fidirana manaraka amin'ny tsena eropeana sy amerikana. Ireo vokatra dia manarona ny 12V malaza ankehitriny ...